PowerInbox: Sehatra fandefasana hafatra ho an'ny maro, mandeha ho azy, Multichannel | Martech Zone
PowerInbox: Sehatra fandefasana hafatra ho an'ny maro, mandeha ho azy, Multichannel
Alatsinainy, Novambra 16, 2020 Alatsinainy, Novambra 16, 2020 Jeff Kupietzky
Amin'ny maha mpivarotra antsika dia fantatray fa ny fampandraisana anjara ny mpihaino marina ny hafatra marina amin'ny fantsona marina dia manakiana, nefa koa sarotra be. Miaraka amin'ny fantsona sy sehatra marobe — manomboka amin'ny media sosialy ka hatrany amin'ny haino aman-jery nentin-drazana - sarotra ny mahafantatra hoe aiza no hampiasanao vola ny ezaka ataonao. Ary, mazava ho azy, ny fotoana dia loharanom-pahalalana voafetra — betsaka kokoa ny zavatra tokony hatao (na azonao atao), noho ny misy fotoana sy mpiasa manao azy.
Ny mpanonta nomerika dia mahatsapa an'io tsindry io angamba mihoatra ny indostria hafa, manomboka amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra ka hatramin'ny bilaogy resahina, ny fomba fiainana ary ny niche, ny famoahana manokana Miaraka amin'ny fahatokisana ny media amin'ny tany mihozongozona, ary toa toa gazillion hafa isan-karazany mifaninana amin'ny sain'ny mpanjifa, ny fampifandraisana ny mpihaino tsy laharam-pahamehana fotsiny - resaka fahavelomana izany.
Araka ny fantatry ny mpivarotra dia miankina amin'ny dokam-barotra ny mpampanonta mba hitazomana ny jiro sy ny servera ho revo foana. Ary fantatsika ihany koa fa ny fahazoana ireo doka ireo eo alohan'ny mpihaino kendrena dia ilaina amin'ny fitakiana fidiram-bola. Saingy rehefa lany andro ny cookies an'ny antoko fahatelo dia lasa fanamby lehibe kokoa ny fikendrena ny mpihaino.
Ny mpanjifa ankehitriny dia manana fanantenana be dia be ho an'ny personalization-raha ny tena izy, efa ho 3 amin'ny 4 no milaza tsy handray anjara izy ireo miaraka amin'ny atiny marketing raha tsy hoe namboarina ho tombontsoany izy ireo. Io dia ahiana lehibe ho an'ny mpanonta sy ny mpivarotra — mihaona ny fenitra avo lenta dia miha mafy satria ny olana momba ny fiainana manokana momba ny tsiambaratelo mifandona amin'ny fenitra avo lenta ho an'ny personalization. Toa tratran'ny Catch 22 daholo isika!
Ny sehatra PowerInbox dia mamaha ny paradisa momba ny fiainana manokana / personalization ho an'ny mpanonta, mamela azy ireo handefa hafatra mandeha ho azy sy mandeha ho azy amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny mailaka, tranonkala, ary fampandrenesana fanosehana — fantsom-pifandraisana feno. Miaraka amin'ny PowerInbox, ny mpamoaka habe rehetra dia afaka mandefa ny atiny mety amin'ny olona mety amin'ny fantsona havanana mba hamaliana ny valiny.
Fanamafisana ny atiny mifototra amin'ny mailaka
Ity ny fomba fiasan'izy io: Voalohany, PowerInbox dia mampiasa adiresy mailaka ho an'ny mpamandrika -tsy cookies - hamantarana azy ireo amin'ny fantsona rehetra. Fa maninona no mailaka?
Safidiny io, noho izany dia misoratra anarana / manaiky ny handray atiny ny mpampiasa, tsy toy ny cookies mandeha ao ambadiky ny seho.
Maharitra satria mifamatotra amin'ny olona tena izy fa tsy fitaovana. Voatahiry ao amin'ilay fitaovana ny cookies, midika izany fa tsy fantatry ny mpanonta fa mpampiasa mitovy io rehefa miala amin'ny fampiasana iPhone mankany amin'ny solosaina findainy. Miaraka amin'ny mailaka, PowerInbox dia afaka manara-maso ny fihetsiky ny mpampiasa manerana ny fitaovana sy manerana ny fantsona ary mikendry ny atiny mety tsara.
Marina kokoa izany. Satria zara raha zaraina ny adiresy mailaka, tsy manam-paharoa io olona io, fa ny cookies kosa manangona angona isaky ny mpampiasa an'io fitaovana io. Ka raha mizara takelaka na solosaina finday ohatra ny fianakaviana, ohatra, ny angon-drakitra mofomamy dia fikorontanan'ny reny sy ny dadany ary ny ankizy, izay saika tsy azo tanterahina mihitsy ny tanjona kendrena. Miaraka amin'ny mailaka, ny data dia mifamatotra mivantana amin'ny mpampiasa tsirairay.
Raha vantany vao mamantatra mpamandrika iray ny PowerInbox dia fantatry ny moterany AI fa ny hetahetan'ny mpampiasa mifototra amin'ny safidiny sy fitondran-tena fantatra hananganana mombamomba ny mpampiasa marina. Mandritra izany fotoana izany, ny vahaolana dia mivoaka ihany koa amin'ny alàlan'ny atin'ny mpanonta mba hifanaraka amin'ny atiny mifandraika amin'ny mpampiasa mifototra amin'ny mombamomba azy ireo sy ny zava-nitranga fantatra amin'ny fotoana tena izy.
Avy eo, ny PowerInbox dia manome izany atiny ho an'ny mpampiasa izany amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny Internet na fampandrenesana fanosehana miorina amin'ny fantsona izay naneho ny fahaizany fifamatorana ambony. Rehefa miasa ny sehatra dia manadio tsy tapaka ny fizotran'ny atiny ary manavao tsy tapaka ny maodely ho fanaingoana mihombo hatrany.
Satria misy ifandraisany sy mahasoa tokoa ny atiny, ny mpamandrika dia matetika mikitika, mamily fifanakalozana ary fidiram-bola ho an'ny atiny mpanangom-bola. Mbola tsara kokoa aza, PowerInbox dia manolotra safidy fidirana an-toerana voavela, ahafahan'ny mpanonta mampiditra mivantana ny atiny doka ao amin'ny mailak'izy ireo ary mampandeha fampandrenesana.
Ny fahamoran'ny sehatra sy ny-fanadinoana azy dia mamela ny mpanonta hifampiraharaha amin'ny votoatiny voatokana tsirairay amin'ny ambaratonga rehetra - zavatra iray izay tsy azo atao raha tsy misy ny sehatra mandeha ho azy PowerInbox. Ary, satria mandeha ho azy ny fampidirana doka, dia mitahiry fotoana be dia be amin'ny famoahana endrika sy fanondranana olona an-tsokosoko ny mpanonta. Izy io dia mifangaro ao amin'ny Google Ad Manager ihany, mamela ny mpanonta hisintona famoronana doka mivantana avy amin'ny tahiry an-tserasera efa misy nefa tsy misy fiezahana.
Maninona ireo mpivarotra no tokony hikarakara
Ny sehatra PowerInbox dia tokony ho eo amin'ny radar'ny mpivarotra noho ny antony roa:
Saika ny marika rehetra dia mpanonta ankehitriny, mizara atiny bilaogy, fampiroboroboana mailaka ary fampandrenesana fanosehana ho an'ny mpamandrika. Ireo mpivarotra dia afaka mampihatra ny sehatry ny PowerInbox ihany koa amin'ny fitantanana ny fanatontosana sy ny fizarana ny atiny multichannel, ary koa ny fanonerana vola. Ny marika dia afaka mampiditra doka ho an'ny mpiara-miasa amin'ny mailaka ataon'izy ireo na mandatsaka ny tolo-kevitr'izy ireo manokana ho toy ny "doka" ao anaty mailaka fandefasan-dry zareo, manolotra fonon-tànana mahafinaritra mba hiaraka amin'ireo baoty vaovao ireo, ohatra.
Ny dokam-barotra amin'ny mpanonta nomerika mampiasa ny sehatry ny PowerInbox dia fotoana mety hametrahana ny marika eo alohan'ny mpanatrika kendrena sy mirotsaka an-tsehatra. Na dia talohan'ny areti-mandringana aza dia nilaza ny 2/3 an'ny mpamandrika fa tsindrio ny doka iray amin'ny alàlan'ny mailaka mailaka. Nandritra izay enim-bolana lasa izay, ny PowerInbox dia nahita fiakarana 38% tamin'ny fisokafan'ny mailaka, midika izany fa mirongatra ny fidiran'ny mailaka. Ary ny 70% n'ny mpampiasa dia efa misoratra amina fampandrenesana fanindriana, noho izany dia misy ihany koa ny mety lehibe.
Satria manantena zavatra betsaka kokoa avy amin'ny mpivarotra amin'ny resaka personalization sy atiny voafaritra manokana ny mpijery, ny sehatra toy ny PowerInbox dia manome ny AI sy ny automatisation izay ahafahantsika mahatratra ireo fenitra avo lenta ireo. Ary, amin'ny fanomezana ny mpijery bebe kokoa amin'izay tadiaviny, dia afaka manangana fifandraisana matanjaka sy mirona kokoa isika izay mitarika ny tsy fivadihana sy ny vola miditra.
Makà Demo PowerInbox
Tags: personalization mailakasehatra fandefasan-kafatrahafatra multichannelpowerinbox
Jeff dia talen'ny tale jeneralin'ny PowerInbox, orinasa teknolojia manavao izay manampy ny orinasa hampiasa vola amin'ny alàlan'ny atiny mavitrika. Talohan'ny nidirany tao amin'ny PowerInbox, Jeff dia filoham-pirenena sy tale jeneralin'ny Oversee.net, nitantana ny asa aman-draharaha eran'izao tontolo izao ary nanangana portfolio an'ny domain an'ny Oversee ho iray amin'ireo lehibe indrindra manerantany, nanangana ny orinasa ho mpitarika amin'ny sehatry ny Internet. Teo ambany fitarihany, ny orinasa dia niova ho taranaka mitarika, manangana orinasa marobe fitomboana avo sy avo lenta. Talohan'izay, Kupietzky dia niasa tamin'ny toeran'ny mpitarika niaraka tamin'ny X1 Technologies, Digital Insight (Intuit), Siebel Systems (Oracle), ary Loudcloud / Opsware (Hewlett-Packard). Nanomboka ny asany tamin'ny maha consultant an'ny McKinsey & Co. i Jeff, namolavola paikady fandraharahana ho an'ny mpanjifa rindrambaiko, fiantohana ary banky. Mpikabary matetika amin'ny kaonferansa Digital Media, naseho ihany koa izy tao amin'ny CNN, CNBC, ary tamin'ny gazety sy gazety ara-barotra maro.
Swing2App: Ny lozisialy fampandrosoana farany tsy misy kaody code